Konke mayelana neWeimaraner | Izinja Zomhlaba
Konke mayelana neWeimaraner
UMonica Sanchez | | Izinja zizala
IWeimaraner yisilwane esingakholeki, esithanda ukugijima futhi, ngaphezu kwakho konke, ukusebenza ngokubambisana nomhlahlandlela waso ongumuntu. Ngoboya obuthokozela ukuqeqeshwa, futhi bujwayele ukuzwana kahle nezinye izilwane.
Uma ucabanga ukukhulisa umndeni wakho ngenja futhi ufuna eyodwa enamandla, ehlakaniphile futhi enobungane, unganqikazi: i-Weimaraner ingenye yezinketho zakho ezinhle kakhulu. Ngokulandelayo uzothola ukuthi kungani 🙂.
1 Umsuka nomlando
2 Ziyini izici zomzimba?
3 Unjani umlingiswa wakho?
4 Ziyini izinkathazo zabo?
I-protagonist yethu uyinja odabuka eJalimane eyaziwa njenge-Weimar Braco noma i-weimaraner eyaqala umlando wayo ngaphambi kuka-1800; Kodwa-ke, kusukela ngaleso sikhathi asikaze sithole okungaphezulu kokuqoshwa okuthile lapho sibona khona izinja ezifana kakhulu nenja esiyaziyo namuhla. Kwaze kwaba ngekhulu le-XNUMX lapho i- UMkhulu uDuke Carlos Augusto ebusa iDuchy yaseSaxony-Weimar-Eisenach, wakuthanda ukuzingela umdlalo omkhulu.
Olunye lwalezo zinsuku yahlangana nabanduleli beWeimaraner yamanje, futhi yanquma ukuthuthukisa uhlobo lwezinja ezinhlobonhlobo zokuzingela nokuthi izosetshenziswa kuphela yizikhulu zangaleso sikhathi. Ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX, lapho iRiphabhulikhi yaseJalimane yayivele ikhona, kwakhiwa i-German Weimaraner Club, futhi futhi lolu hlobo lwaphinde lwavinjelwa kubantu.
Maphakathi nekhulu lama-XNUMX, i-protagonist yethu yathunyelwa e-United States sibambene noWoward Knight, owayeyilungu leGerman Weimaraner Club. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, lolu hlobo lwalwaziwa kancane kancane emhlabeni wonke.
Ziyini izici zomzimba?
IWeimaraner yinja enkulu, enesisindo esiphakathi kuka-25 no-45kg kanti ukuphakama kwayo kuyabuna phakathi kuka-55 no-70cm., abesifazane bancane kancane kunabesilisa. Umzimba uzacile, uqinile futhi unemisipha, uvikelwe ngengubo yezinwele ezimfishane noma ezinde, kuya ngokuhlukahluka: uma kuyizinhlobonhlobo zezinwele ezimfishane, ijazi langaphandle linamathele emzimbeni futhi liqinile futhi liminyene; Ngakolunye uhlangothi, ezinhlobonhlobo ezinezinwele ezinde, ijazi langaphandle lide futhi libushelelezi, linengubo yangaphansi noma engenayo. Umbala wejazi ungwevu esiliva, inyamazane impunga noma impunga yegundane.
Ikhanda libanzi kwabesilisa kunabesifazane, kepha kuzo zombili izimo liyahambisana. Impumulo inombala wenyama, kepha iba mpunga ngasisekelo. Amehlo abantu abadala akhanya ngokukhanya okumnyama, kuyilapho imidlwane iluhlaza okwesibhakabhaka. Izindlebe zibanzi futhi zilenga.
Umsila uqinile futhi imilenze nayo iqinile. Isikhathi sabo sokuphila siyiminyaka eyi-10 kuya kwengu-12.
Unjani umlingiswa wakho?
IWeimaraner iyinja uhlakaniphile, uqotho, unelukuluku lokwazi, kodwa futhi nginamahloni nabantu ongabazi. Udinga ukuhola indlela yokuphila esebenzayo, ngoba unamandla amaningi; empeleni, kubaluleke kakhulu ukuthi ikhishwe lapho kudlalwa khona futhi idlalwe ngayo nsuku zonke ukuze ikwazi ukuyishisa futhi izizwe ijabule.
Ziyini izinkathazo zabo?
Ukondliwa kweWeimaraner kufanele isuselwe enyameni. Njengoba iyi-carnivore, akukhuthazwa ukuyinika ifidi ecebile okusanhlamvu, ngoba ayikwazi ukukugaya kahle.
Ngokusobala, akufanele uswele amanzi ahlanzekile futhi ahlanzekile, atholakala mahhala njalo.
Izinwele zalesi silwane zifushane, kodwa lokho akusho ukuthi akudingeki zinakekelwe. Nsuku zonke kufanele udlule ikama, noma uma uthanda, ibhulashi-glavu ukususa yonke imikhondo yezinwele ezifile.. Lokhu kudingekile ikakhulukazi ehlobo, ngoba lokhu kuzokukwenza uzizwe upholile.
Kuyinja lokho idinga ukuphuma iyokwenza okuthile ngaphandle kwekhaya nsuku zonke. Ukuhamba, ukugijima, imidlalo epaki noma olwandle… Noma yini ekuphazamisayo, ekusiza ushise amandla, futhi ikwenze uzizwe umuhle izokwenza.
Ngeshwa, zonke izinja ezinkulu zizala zenzelwe ukuxegisa i-dysplasia ngisho nesisu esiswini. Akukho okuningi okungenziwa ukukugwema, ngaphandle kokukuyisa kudokotela wezilwane ukusihlola okungenani kanye ngonyaka, futhi nokukunikeza imigomo evunyelwe ezweni lethu.
Uma ufuna ukuhlala iminyaka embalwa nenja enhle kakhulu, okungangabazeki ukuthi izokunikeza injabulo enkulu nothando oluningi, khona-ke sincoma ukuthi uvakashele indlu yenja yalolu hlobo. Lapho, kufanele ubuze yonke imibuzo onayo ukuze ukuthenga kube yimpumelelo.
Kulezi zindawo bazokucela 700-1000 ama-euro okomdlwane.
UWeimaraner uyinja enhle kangangokuba akunakwenzeka ukuyeka ukumncoma. Ngakho-ke uma ufuna ukubona izithombe eziningi, chofoza kuzo ukuze uzibone zikhuliswa 🙂:
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izinja zizala » Konke mayelana neWeimaraner
Inja yaseLouisana Catahoula Leopard, inja enhle futhi enhle kakhulu
I-Entlebuch Mountain Dog, inja ethandekayo